Nhau - Ndezvipi zvishandiso zvemushini wecheka uswa
Mucheka Wemashizha Nereza
OE Kutsiva Brands
Brush Rinocheka Nereza
Hedge Gadzira Nereza
Ndezvipi zvishandiso zvemushoni wecheka uswa
Ndezvipi zvinhu zvinoitwa neiyo uswa hwesvina have? Zhengchida Nereza Factory achaita nyanzvi kuongorora isu.
Icho chishandiso chinhu chakakosha chinosarudzira kucheka mashandiro echishandiso, icho chine simba rakakura mukugadzirisa kushanda, kugadzirisa mhando, kugadzirisa mutengo uye kusimba kwechombo.
Iyo inorema icho chishandiso chinhu, zvirinani kupfeka kwayo kuramba, kuwedzera kuomarara, kudzikisira kuomarara kuomarara, uye zvakanyanya kupwanya zvinhu. Kuomarara uye kuomarara mapara anopesana, uye zvakare iri kiyi iyo zvinhu zvekushandisa zvinofanirwa kukunda. Kune graphite maturusi, akajairwa TiAIN kupfeka anogona kusarudzwa nenzira kwayo mukusarudzwa kwezvinhu zvine kuomarara kuri nani, ndokuti, zvirimo zvecobalt zvishoma zvishoma; yedhaimondi-yakavharwa graphite maturusi, kuomarara kunogona kusarudzwa nenzira kwayo mukusarudzwa kwezvinhu. Ndokunge, iyo cobalt yezvinyorwa iri pasi zvishoma. Yakadzama sumo nezve makwenzi ekucheka uswa
Mower mashizha anogona kuva customized nokurondedzerwa
Mucheka unocheka uswa mashandisiro: aishandiswa kucheka maruva egadheni uye zvidimbu zvidimbu zvehupamhi uye zvimwe zvinhu.
Mashizha ekucheka lawn akakodzera kucheka zvinhu: bindu remumunda, mvura neminda yakaoma, huswa, nzira dzemumakomba, rwizi kumahombekombe masora, mashizha ekucheka uswa, zvidimbu zvidimbu zvepakati, masango matete, fenzi
Maumbirwo uye musimboti wekushanda wemagetsi lawn mower
Mucheka unocheka uswa: Mushini wekukohwa furu unocheka mafuro kana zvimwe zvirimwa zvinogona kugadzirwa kuita huswa wozviisa pasi. Kune mhando mbiri dzekudzorera nekutenderera. Kudzosera mushandi weuswa uswa: Kuvimba nechero kufambisa kwekucheka banga rinofambiswa uye banga rakamisikidzwa pamucheki kucheka furuji. Hunhu hwayo ndewekuti mashanga ekucheka akatsvinda, simba rinodikanwa pamubato wekucheka hupamhi idiki, asi kuchinjika kumatunhu akasiyana ekukura kwefuru kwakashata, uye zviri nyore kuvhara. Inokodzera huswa hwakapetwa hwehuswa uye husango hwekugadzira pamwe nezvakawanda goho. Nekuda kwekudengenyeka kukuru kweanocheka panguva yekushanda, kuwedzera kwekumhanyisa kumhanya kunogumira. Yekumhanyisa kumhanya kweiyo inofamba banga kazhinji yakaderera pane 3 m / s. Iko kumberi kumhanya kwekuvhiya kunowanzoita 68 km / h. Tarakita-yakaiswa uswa mower: yakapusa chimiro, mwenje, inofambika uye inochinjika. Kune matatu marudzi ekumiswa kumberi, kumiswa padivi uye kusimiswa kumashure. Gare gare kusimudzwa mowers ndiwo anonyanya kushandiswa.
Zvakanaka, ngatitaurirei akawanda mashini ekucheka uswa mashizha.
Zhengchida inonyanya kugadzira mashizha esora, gamuchirai kugadzira uye kutenga!
Post nguva: Mar-15-2021
Ndezvipi zvekushandisa zvishandiso zvehuswa m ...
Ndezvipi zvinhu zvinogadzirwa nemushoni unocheka uswa ...
Maitiro ekusarudza lawn mower blade？
Hunhu hwemashizha ekucheka ...
Rimwe lawn mower blade rinoshandisa iwe don '...
Isu tinoziva kuti kune akawanda maumbirwo emutemo ...
Zhengchida's timu yekutengesa yakapinda iyo 22n ...
Otomatiki Mechanical Arms Shanduko ye ...
Pasina nguva refu yapfuura, Zhengchida yaive nemimwe mem ...